भालु पासोमा फस्यो – Himal FM 90.2 MHz
स्थानीय समाचार adminhimal August 25, 2019
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका–३ तामाखानीका कृषकले थापेको साधारण पासोमा एउटा भालु फसेको छ । वन्यजन्तुबाट कृषकले मकैबाली जोगाउनका लागि थापेको पासोमा दुई दिन देखि भालु फसेको हो ।
बर्षेनी भालुको आक्रमणबाट जनधनको क्षति व्यहोरेका कृषकले मुख्य खाद्यान्न बाली मकै जोगाउन साधारण पासो थापेको थिए । मकै खानका लागि आएको एउटा भालु दुई दिन देखि पासोमै फसेको डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ । भालु फसेको थाहा पाएपछि तामाखानीका स्थानीयले शनिबार प्रहरी र वन कार्यालयमा खबर गरेका थिए ।
डिभिजन वन अधिकृत डा. ईन्द्र प्रसाद सापकोटाले वन र प्रहरीको टोलीले भालु फसेको स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केको बताए । ‘कानुनःभालुलाई मार्न र मर्न नपाईने भएकाले रेक्यू टिम मगाएका छौ । टिम सोमबारसम्म आईपुग्ला । हाम्रो पहल जारी छ ।’ वन अधिकृत डा. सापकोटाले भने । भालु खानेकुरा विना पनि कम्तिमा एक हप्ता बाँच्ने भएकाले पासो मर्ने संभावना कम रहेको सापकोटाको भनाई छ ।
भालुको विगविगी बढेपछि तामाखानीका स्थानीयले भालु नियन्त्रणको मगा राखेका छन् । बर्षेनी जनधनको क्षतिबाट हैरानी बनेका उनीहरुले मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्धको समाधान खोज्न सरकारसमक्ष माग राखेका हुन् । २०७२ सालमा भालुको आक्रमणमा परेका प्रेम रेग्मी मगरले राज्यले भालु र मानिसमा रोज्नुपर्ने बताए । ‘राज्यलाई मानिस भन्दा भालु प्यारो हो भने भन्नुप¥यो । हामी बर्षेनी पिडामा छौ ।’ मगरले भने । बर्षभरि खाने मकै राम्ररी दाना नपस्दै स्वाहा पार्नेभएकाले बर्षेनी कृषकको परिश्रम खेर गईरहेको मगरको भनाई छ ।
तामाखानीकै भवानी राजभण्डारीले पुरुषको तुलनामा महिलाहरु भालु आक्रमणको जोखिममा परेको आक्रोश व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘विहान बेलुका घाँसदाउराका लागि बारी, जंगल धाउनुपर्छ । कतिखेर भालुको आक्रमण पर्छौ । थाहा हुदैन् । अघिल्लो बर्षपनि तामाखानीमा मात्रै तिन जना गम्भिर घाईते भयो ।’ उनले कानुन संशोधन गरि मानिसलाई दुख दिने कुनैपनि वन्यजन्तु मार्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरिन् । ‘हैन भने सरकारले समातेर निकन्जमा लगेर पाल्नुप¥यो ।’
कृषकहरुले भालु आतंक खेपेको जगजायर हुदा पनि कानुन संशोधनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदिएको गुनासो गरेका छन् । अघिल्लो बर्ष भालु नियन्त्रणको माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका तामाखानीबासीहरुले यो पटक पनि स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउने तयारीमा जुटेका छन् । अघिल्लो बर्ष जिल्लाभर भालुको आक्रमणबाट ९ जना सख्त घाईते भएका थिए भने यो बर्ष २ जना भालुको आक्रमणमा परिसकेका छन् ।
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको तामाखानी, बेनी, फाप्लु, गार्मा, महाकुलुङ गाउँपालिकाको बुङ, छेस्काम र गुदेल क्षेत्रमा बर्षेनी भालुले लाखौको खाद्यान्न बालीमा क्षति पु¥याउदै आएको छ भने बर्षेनी झण्डै दर्जन मानिस भालुको आक्रमणमा पर्दै आएका छन् ।
भालु धपाउन के गर्ने ?
भालुको विगविगी हुने स्थानमा अहिले कृषकहरु रातभर सुत्दैनन् । कतिपय स्थानमा रातभर सिठुठी मारेर भालु धपपाउदै आएका छन् । रातभरि भालुले दाना हाल्दै गरेको मकैमा क्षति पु¥याउने भएकाले कृषकहरु हैरानीमा छन् । कृषकहरुले भालु मार्न पाउनुपर्ने माग राखिरहेको बेला डिभिजन वन कार्यालयले भने भालु धपाउनका लागि पेटेकाको प्रयोग गर्ने भएको छ ।
डिभिजन वन अधिकृत डा. ईन्द्र प्रसाद सापकोटाले पटेका पड्काएर भालु तर्साउने विधि प्रयोगका लागि कृषकलाई वितरण गर्न पटेका सल्लेरी ल्याईपु¥याएको बताए । उनले भने, ‘भालुबाट हुने धनजनको क्षति कम गर्नका लागि कृषकलाई वितरण गर्न पटेका ल्याएका छौ । छिट्टै वितरण गछौ । जहाँ भालुले सताएको छ, त्यस ठाउँका कृषकले डिभिजन वन कार्यालयमा सम्पर्क राखे निशुल्क पटेका उपलब्ध गराउछौ ।’